Umbane oblowu, umbala wale mihla kunye nenkalipho yekhaya lakho | Bezzia
Ibhlowu yombane, umbala wale mihla kunye nenkalipho yekhaya lakho
UMaria vazquez | | Iindlela zokuhombisa
Ukuba ujonge umbala oza kunikela ngawo a Inqaku langoku nelinesibindi kwikhaya lakho, Ungacingi ngayo kwakhona, umbane oluhlaza ngumbala wakho. Asinakutsho ukuba ngumbala wesiqhelo onje Peri kakhulu, Umbala wePantone woNyaka ka-2022, imbi kakhulu ihlala iyindlela elungileyo yokufezekisa izithuba ezigcwele ubuntu
Ngaba igumbi lakho lokuhlala lifuna intlantsi? Awuyazi indlela yokongeza umlinganiswa kwigumbi lokulala elimhlophe ngaphandle kotyalo-mali olukhulu? Ukuba unqwenela ngento ekhanyayo, blue blue iya kuba ngumhlobo omkhulu. Unokupeyinta udonga okanye iingcango kulo mbala ukuba ufuna ukuphula yonke into okanye uyisebenzise ngobulumko kwifenitshala encinci okanye izinto zobugcisa. E-Bezzia sabelana nawe ngeembono namhlanje.
Kungabonakala ngathi umbala onzima ukudibanisa kumhombiso wamakhaya ethu, kodwa ngokuchaseneyo; blue blue ngumbala oguquguqukayo kakhulu kwaye idibanisa ngokugqibeleleyo neminye imibala emininzi. Ngumbala omangalisayo, ongenakuphikiswa, yiyo loo nto kubalulekile ukwazi ukuba sifuna ukuzibeka phi esichengeni okanye ukuba sinesibindi kangakanani na, kuba ekuhambeni kwexesha kunokusidinisa.
Igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala Zingamagumbi apho sinokudlala khona ngale blue ngaphandle koloyiko kwaye sigxininise kuwo kweli nqaku. Ngaba ufuna iimbono zokuyibandakanya kwenye kwaye kwenye? Namhlanje uya kufumana ekukhethweni kwethu kwemifanekiso yonke inkuthazo oyifunayo ukuyenza.
1 Kwigumbi lokutyela
3 Kwigumbi lokulala
Ukujonga le mifanekiso ilandelayo akukho mathandabuzo: izitulo baba yeyona ndlela idumileyo yokudibanisa umbane oluhlaza kwigumbi lokutyela. Ngaba ayingombono olungileyo ukupeyinta okanye ukuhlaziya izitulo zakho ezindala ngeblue blue? Ngoko unokubanika ubomi besibini kwaye ufezekise umnxeba wanamhlanje kunye nesibindi kwigumbi lakho lokudlela ngexesha elifanayo.
Ngaba ujonge ezinye iindlela zoqobo? Bet kwi ukupeyinta clowns phezu kwetafile kulo mbala okanye ubuganga beka ikhabhathi eluhlaza ecaleni kwetafile yakho yomthi. Kwaye ungalibazisi ukupeyinta udonga kulo mbala ukuba ufuna ukunika indawo ephambili kwigumbi lokutyela ngaphakathi kwendawo enkulu efana nekhitshi okanye igumbi lokuhlala.
Igumbi lokuhlala lidla ngokuba lelona gumbi likhulu endlwini, elikuvumela ukuba ube nesibindi ngento ebambekayo. Ngoba kutheni peyinta udonga Okanye iingcango ngaphakathi kwiblue blue? Kuya kothusa, akukho mathandabuzo ngaloo nto. Kuthekani ukuba ufihla ikhabhathi yeTV kolu donga lupeyintiweyo? Ingumbono oqaqambileyo kwigumbi lokuhlala njengalo mfanekiso kunye nemigangatho emnyama kunye neendonga ezinombala okhanyayo kunye nefenitshala.
I-sofa, i-armchair okanye i-pouf zezinye iindlela zokudibanisa lo mbala wangoku kunye nesibindi kwigumbi lokuhlala. Kwaye ungayenza kungakhathaliseki uhlobo lweli gumbi njengoko unokubona kumfanekiso ongentla. Isiphumo sinobuganga kodwa ukuba usebenzisa imibala engathathi hlangothi njengomncedisi uya kwenza lula indawo.
Imisebenzi yobugcisa kunye namalaphu Ziyenye indlela yokubandakanya iibrushstrokes eziluhlaza ngaphandle kokuba ngumthwalo omkhulu. Ingubo kwi-sofa ebomvu, i-vase kwitafile yekhofi okanye ukuprintwa kwejometri eludongeni inokwanela kuwe.
I-headboard yombane eluhlaza iya kukwazi ukuguqula yonke igumbi lokulala. Emva koko, olu ludonga oluphambili lwegumbi, apho onke amehlo ahlala eqondiswe khona. Ngaba ufuna ukubeka umngcipheko ngaphezulu? Peyinta okanye ugubungele udonga ngeblue kwaye wongeze umqamelo kumbala ofanayo ebhedini ukudala ukuqhubeka.
Ungabandakanya oku blowu kwindawo yokulala, kunye nesigqubuthelo seduvet okanye iplaid ebhedini yakho enxibe ezimhlophe. Imhlophe, ngaphandle kwamathandabuzo, enye yemibala yokudibanisa nombane oluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa ingeyiyo yodwa; ama-nuances amancinci kuzo zonke ezibomvu, iiorenji, iimostade okanye eziluhlaza, Ziya kuhambelana ngokugqibeleleyo nale.
Ngaba uyathanda umbane oblowu? Ngaba unesibindi sokuyidibanisa kumhombiso wekhaya lakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Iindlela zokuhombisa » Ibhlowu yombane, umbala wale mihla kunye nenkalipho yekhaya lakho
Indlela yokunceda iqabane lakho ukuba linqobe intlungu